DuckDuckGo dia manolotra ny fitaovany manokana handefasana ireo mpanara-maso ny mailaka | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 28/07/2021 12:00 | Fampiharana iPhone, About us
Ny fanarahan-dia ataon'ireo orinasa lehibe dia nanjary iray amin'ireo andry fototra tokony hampiasam-bola hiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa. Apple dia nanolotra ny asany volana vitsivitsy lasa izay tao amin'ny WWDC 'Afeno ny mailako'. Fitaovana afaka misoroka ny fanarahana ny mailaka voaray amin'ny alàlan'ny fandefasana vaovao diso amin'ireo mpanaraka amin'ny alàlan'ny mailaka an-tsokosoko noforonin'i iCloud. Toy izany koa, DuckDuckGo dia namoaka fitaovana fiarovana azy manokana mailaka. Miaraka amin'ny antony hiarovana ny vaovao sy ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, ity fitaovana ity dia manomboka miasa amin'ny dingana beta.
1 Fanarahana ny mailaka: fahavalo iraisana
2 DuckDuckGo dia mandefa ny fitaovana fanoherany ny mailaka
3 Tsiambaratelo momba ny fiainam-panahin'ny mpampiasa
Fanarahana ny mailaka: fahavalo iraisana
Ny zava-misy izay manodidina antsika dia tsy manao na inona na inona isika fa mizara vaovao nefa tsy tsapantsika izany. Araka ny fanadihadiana navoaka sasany, dia maherin'ny 70% ny mailaka sokafantsika sy voarainay no misy mpanaraka. Midika izany fa afaka mahalala ny mpandefa rehefa nosokafanay ny mailaka, avy taiza ary fitaovana inona. Ity dia ohatra iray hafa amin'ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo izay aharihary amintsika ary hipoitra tsikelikely.
DuckDuckGo dia mpizaha tranonkala izay mikarakara manome antoka ny tsiambaratelon'ny mpampiasa amin'ny fikarohana ataon'izy ireo fanakanana izay fitaovana manelingelina ny fiainana manokan'ny mpampiasa. Izy io dia manana rindrambaiko ho an'ny iOS sy Android ary iray amin'ireo mpitety tranonkala izay mitombo indrindra. Manaraka indrindra ny fiheverana ny fivoarany sy ny fampidirana azy amin'ny tranokala marobe noho ny fanitarana azy.
DuckDuckGo dia mandefa ny fitaovana fanoherany ny mailaka
Ny serivisy fandefasana mailaka maimaimpoana dia manafoana ireo mpanara-maso ny mailaka ary miaro ny tsiambaratelon'ny adiresy mailakao manokana nefa tsy mangataka anao hanova mailaka na serivisy.
Avy amin'ny mpitety tranonkala azo antoka nanapa-kevitra ny handefa izy ireo fiarovana amin'ny mailaka. Ity fitaovana vaovao ity dia tena mitovy amin'ny iCloud + 'Afeno ny mailako'. Saingy, tsy mitovy amin'ny hevitra sasany izay hodinihinay etsy ambany. Roughly, dia fitaovana afaka misoroka ny trackers tsy hanangona ny mombamomba ny mpampiasa rehefa manokatra ny mailaka izy ireo, manatsara ny tsiambaratelon'ireo mpampiasa.
Ny fiasan'ny fitaovana DuckDuckGo dia mitaky fananganana mailaka eo ambanin'ny domain @ duck.com. Ny mailaka rehetra azontsika ao amin'ny boaty fampidirana anay dia handalo ny rafitr'i Duck eo ambanin'ny domain @ duck.com. Amin'izay dingana izay, hamafana sy hanafoana ny tracker hita ny rafitra ary handefa ny mailaka, tsy misy tracker, amin'ny kaonty mailaka voalohany, ohatra, Gmail na Outlook.
Tsiambaratelo momba ny fiainam-panahin'ny mpampiasa
Ny maha samy hafa an'ity rafitra ity sy ny rafitra ampiasain'i Apple dia ny fitaovana Big Apple tsy manafoana ny mpanaraka fa kosa mandefa vaovao diso sy diso misaotra ny fanentanana tamin'ny alàlan'ny mailaka noforonina sendra. Na izany aza, ny fitaovana DuckDuckGo dia afaka manaisotra ireo mpanaraka ary mandefa mailaka virjina amin'ny kaonty elektronika lehibe.
Ho fanampin'izay, araka ny toky nomen'izy ireo avy amin'ny mpitety, ny fiasa dia mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra misaotra ny fampidirana ny fanitarana amin'ny tranokala lehibe. Fa kosa, iCloud + 'Afeno ny mailako' dia tsy ho hita ao amin'ny iOS, iPadOS ary macOS ihany. Ao amin'ny kinova farany an'ny betas izay navoaka nandritra ireo volana ireo, mazava ho azy.
Ny endri-javatra DuckDuckGo dia andrana amin'ny vondrona voafantina mpanandramana beta ihany. Na dia lojika aza fa amin'ny herinandro ho avy dia ho azon'ny rehetra izy io. Raha te hiditra amin'ny beta ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny fampiharana, mankanesa any amin'ny Settings> Beta functions> Mail protection> Midira amin'ny lisitra fiandrasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » DuckDuckGo dia manolotra ny fitaovany manokana hanalavirana ireo mpanara-maso mailaka